1) Batidza iri kure kure, tinya bhatani reTV uye bhatani OK panguva imwe chete, iro bhuruu re LED mwenje ichapenya nekukurumidza kwazvo, zvinoreva kuti remote control inopinda pairing mode.
2) Vhara chinogamuchira USB mune mamwe madhiira (smart TV, TV bhokisi, MINI PC, nezvimwewo) uye mirira kwemaminitsi matatu. Iyo bhuruu ye LED mwenje inomira kupenya, zvinoreva kuti pairing iri kubudirira.
2. Basa makiyi
Homepage: dzokera kumenyu huru;
Kudzoka: dzokera kune yapfuura skrini;
Cursor Lock: pfupi pfupi yekukiya isina waya mbeva, imwe yekudhinda kuvhura
Bhurawuza: Vhura bhurawuza
Simba: Dzima iro Android TV bhokisi (shandisa iro rekudzidzira basa)
1. Mushure mekubatanidza iyo inogamuchira USB, mwenje we LED unovhenekera kana chero bhatani rakadzvanywa, wozobuda mushure mekusunungurwa
2.Imberi iAir Mouse modhi, uye kumashure ikhibhodi uye inobata pani.
3.Kudzidzira infrared (bhatani remagetsi chete ndiro rine basa rekufunda)
1) Dhinda uye ubatisise TV uye chengeta cheyuniti red LED mwenje kupenya nekukurumidza. Taiti tsvuku yakavhurika kwe1 sekondi uyezve inopenya zvishoma nezvishoma.
2) Nongedzera infrared remote control pane smart remote control, wobva wadzvanya bhatani remagetsi (kana chero rimwe bhatani). Rambi dzvuku rakabatidzwa.
3) Dhinda bhatani remagetsi pane smart remote control, iyo tsvuku LED mwenje inopenya zvishoma nezvishoma. Kudzidza kuri kubudirira.
4) Dhinda TV kuti ubudise infrared yekudzidza modhi.
Iyo keyboard ine mabhatani makumi mana nematatu ekubata.
1) Kudzosera kumashure: bvisa hunhu hwapfuura
2) Yakakwira yepamusoro: yepamusoro kiyi
3) Pinda: Simbisa kushanda
4) Space: Space bhawa
5) ALT: Chinja pakati penhamba uye akakosha mavara
1) Kufambisa uye kutonga: 2.4G radio frequency isina radio frequency tekinoroji
3) Nhamba yemakhibhodi: 63
4) Bata skrini: yakawanda-inobata
5) Remote control daro: ≥10m
6) Bhatiri mhando: rechargeable lithium bhatiri
7) Kushanda kwesimba rekushandisa: anenge 20mA pasi pekushanda mamiriro
8) Kurema: 130g
1. Nei chigadzirwa chisingashande zvakajairika?
Kutanga, tarisa kana switch yemagetsi yakavhurwa. Kechipiri, tarisa kana iyo inogamuchira ye USB yakanyatso kuvharirwa muPC kana zvimwe zvishandiso zveApple. Chechitatu, tarisa kana bhatiri riine simba rakakwana.
2. Ko iyo yekumhanyisa mhanyisa inogona kuchinjwa here?
Dhinda "kumba" uye "Vol +" kana "kumba" uye "Vol-" kugadzirisa iyo cursor kumhanya
3.Kana iyo yekubata panal kumhanya inogona kuchinjwa?
Dhinda "kumba" uye "peji +" kana "kumba" uye "peji-" kugadzirisa kumhanya kweiyo yekubata skrini
4. Maitiro ekuchinja pakati peMhepo Mouse uye Kubata Panel?
Iko kumberi kune Air Mouse modhi, uye kumashure ndiko keyboard uye yekubata pani. Hapana chikonzero chekutsikirira chero mabhatani.
1) Bvisa remote control usati waisa mabhatiri.
2) Kana iyo yekubata skrini inopinda munzira yekumira, mushandisi anoda kumanikidza mamwe makiyi kuti amuke.
3) Kuti uratidze mwenje wechiedza, mushandisi anofanira kubatidza remote control achichaya. Kana zvisina kudaro, hapana mwenje wechiedza unovhenekera, asi kuchaja hakuzokanganisike.
4) Dzosera zvigadziriso zvefekitori: dzvanya OK + Kudzoka kwemasekonzi matatu
Yekhibhodi Remote Kudzora Isina Mhepo Mouse